UFoxconn ulumkisa ngokunqongophala kwe-chip: Ndisuka mac
I-Foxconn ilumkisa ngokunqongophala kwe-Chip:
Inkxalabo. Elo ligama elinokuyichaza kakuhle imeko efumanekayo kwihlabathi lobuchwephesha ngoku. Ingakumbi kumgangatho wefektri apho ukunqongophala kweetshipsi eqala ukuchaphazela iinkampani ezinamandla njengeFoxconn. Olona manyano lukhulu luka-Apple kwaye lolona luvelisa uninzi lwenkampani kaTim Cook, ubona indlela ukubonelelwa kweetshipsi kuncipha ngakumbi nangakumbi kwaye sele kuqalile ukulumkisa ukunciphisa kwe-10%.
Oko bekusoloko kusithiwa eyona ndlela isebenzayo njengeqela kukwenza kwinkqubo yekhonkco. Nangona kunjalo, kukho ingxaki kwaye yile yokuba ukuba ikhonkco elinye liyasilela, abanye bayachaphazeleka. Kungenxa yoko le nto kusoloko kukho ngaphezulu kwetyathanga elinye kwaye ngenxa yoko banakho ukubonelela ngeengxaki. Nangona kunjalo, xa ikhonkco elingaphumeleliyo lelokuqala, apho abanye kufuneka baqale khona, isisombululo sinzima kakhulu. Le yinto eyenzekayo ngoku ngeetshiphusi.
Kukho ukunqongophala kweetshipsi ezichaphazela lonke ikhonkco kwikhonkco. Besithetha ngolunye usuku ukuba iApple (kunye nabanye) banokugqibela ngokunyusa amaxabiso ukuba banganyanzelwa ukuba benze njalo ngenxa yokulibaziseka kokuthunyelwa ziinkampani zemveliso. Ingxaki ayisekho ukulibaziseka, kukuba abanako ukuzithumela kuba akukho zixhobo eziluhlaza kwaye ke ayisiyiyo ingxaki yeemveliso, kwayes ukuba ngokuthe ngqo ayinakwenziwa.
Akukho nto incinci iseleyo ukuba le meko iqale ukwenzeka. UFoxconn, isigebenga saseAsia kunye nomlingane ophambili we-Apple, ubhengeze ukuba ukusilela kuyaqhubeka ukubakho, kunokwenzeka ngakumbi ukuba kuya kufuneka banciphise ukuveliswa kwezixhobo ngama-10%. Inani eliphezulu kakhulu kuthathelwa ingqalelo ukuba sisibikezelo sokuqala sokwehliswa okwenziweyo ngenxa yokunqongophala kwesitokhwe se-chip kwihlabathi liphela.
Ngokwengxelo zika UMongameli Young LiuLa:
Unikezelo kwiinyanga ezimbini zokuqala zale kota beluselungile, njengoko abaxumi bethu bakhulu kakhulu, kodwa siqale ukubona utshintsho olwenzekileyo kule nyanga. IFoxconn "okwangoku" inokwenzeka thumela nge-10% iimveliso ezimbalwa kunokuba ubucwangcisile, ngaphandle kokuchaza ixesha. Uncedo lwempahla yekhaya lunqunyelwe ngokukodwa, wongeze, njengoko ubhubhane ubangele isikhukula kuloo miyalelo. Impembelelo kwii-odolo ezazikhuselwe kwakudala zilinganiselwe. Ukunqongophala kuya kuthi kwande kwikota yesibini yonyaka olandelayo.
IQualcomm ayiphuncuki koku kunqongophala. Izixhobo ezininzi zeApple zisemngciphekweni
Ingxaki yonikezelo ikwabetha iQualcomm iya kuchaphazela uluhlu olubanzi lweemveliso ze-smartphone ezixhomekeke kwinkampani yezinto eziphambili. I-Apple, efumana iipaneli ze-OLED ezivela kwi-Samsung, inokujongana nokuphazamiseka kwimveliso ye-iPhone. AbakwaSamsung ngoku bahambisa izikrini ze-OLED ze-iPhone 11 kunye ne-iPhone 12. Kubonakala ngathi iApple ayinakuba nangxaki ekuqaliseni ukuveliswa kwezixhobo ngeetshiphu ezintsha ze-A15 kunye neM1 kuba zonke iinkampani ezinkulu zinogcino ngokuchanekileyo ukunqanda ezi ngxaki.
Asithethi malunga noku kunqongophala kuqatshelwe ngoku. Sithetha malunga nokuba kunokwenzeka njani ukuba kuthi kuphela unyaka, xa izixhobo ezitsha zibhengezwe ngo-2022, kuyakufuneka sijongane nenyani yokuba inani lezixhobo esiziqhelileyo azizukufakwa kwimarike. Kwaye ukuba ibiyiyo kuphela, akukho nto inokwenzeka. Ingxaki kukuba amaxabiso anganyuka kwaye ndiyoyika ukuba bazakwenza njalo kwinani elingalinganiyo nokwehliswa kwemveliso. Ukuba ngoku sithetha ngokuhla nge-10% kwimveliso, sinokuthetha ngayo ukunyuka kwamaxabiso malunga ne-20% ngokulula.
Masithembe ukuba ubhubhane uyaphela ngoku, kuba kunjalo akukho nto intle siyifumanayo kuyo. Ubhubhane yenye yezona zinto zibangela ukuba intsilelo ye-chip, ngenxa yemali yentengiso ehambileyo nezixhobo zasekhaya. Iyavakala, nazo zonke iiyure esizichitha emakhayeni ethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-Foxconn ilumkisa ngokunqongophala kwe-Chip:
Uluhlu lwe-beta yesithandathu ye-MacOS Big Sur 11.3, i-tvOS 14.5 kunye ne-watchOS 7.4